Waa maxay Spliff? • Dawooyinka Inc.eu
Haddii aad ku cusub tahay dhaqanka xashiishadda cannabis, waxaad u badan tahay inaad horeba u ogtahay waxa kala-goysyada iyo xuubku u eg yihiin, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan waligaa maqal dhagax fidsan.
1 Qeexida Spliff
2 Maxaa loogu yeeraa Dhagax?
3 Miyaan hirgaliyaa dhagax weyn?
4 Faa'iidooyinka daadadka
5 Koobku ma kaa dhigayaa "mid sare"?
6 Faa'iido darrooyinka daadadka
Halkaan waxaad ku baran doontaa waxa duufaantu tahay, sida duufaantu u heshay magaceeda iyo faa'iidooyinka suurtagalka ah iyo qasaarooyinka sigaar cabida.
Sida wadajirka oo lagu duudduubay warqad cad oo sigaar ah, buufku wuxuu leeyahay muuqaal isku mid ah, laakiin leh dhejis dheeri ah: waxay ka kooban tahay xashiishad iyo tobaatooyin isugu jira. Indhooleyaasha, oo badanaa lagu duubay warqad sigaar ah oo bunni ah, ayaa sidoo kale leh tubaako, laakiin qulqulaya ayaa leh waxyaabo aad u sareeya. Qulqulka sidaa daraadeed waxaa loo qaddarin karaa inay yihiin isku-dhafanno isugeyn iyo dhugo.
Soo-galinta tubaakada xoogga leh ayaa badanaa u horseedda buzz si aad ah u xoog badan isticmaaleyaasha. Qulqulatooyinka ayaa si gaar ah caan uga ah bannaanka Mareykanka, gaar ahaan Yurub, halkaasoo adeegsadayaal badan ay ku raaxeystaan ​​isku darka tubaakada iyo xashiishadda waayo-aragnimadooda sigaar-cabista.
Asal ahaan, qulqulka waa xashiishadda cannabis oo leh maroojin sigaar ah.
Maxaa loogu yeeraa Dhagax?
Ereyga ayaa asal ahaan ka soo jeeda Galbeedka Indian waxaana laga yaabaa inuu ku xirnaa Jamaica. Magaalada Jamaica, si kastaba ha noqotee, qulqulka waxaa loola jeedaa sigaar ay kujirto kaliya xashiil, ma ahan tubaako. Ereyga waxaa badanaa loo isticmaalaa luqadda Ingiriisiga ee loo yaqaan 'slang Jama English' si loogu tixraaco wadajirka si gaar ah u weyn ama xoog badan.
Macnaha saxda ah ee "spliff" lama yaqaan, oo ka duwan macnaha erayga wadajir, kaas oo laga soo qaatay falka faransiiska ee joindre, kaas oo loo tarjumay "ka qaybqaadasho".
Miyaan hirgaliyaa dhagax weyn?
Is-rogista kabahaaga gaarka ahi waxay leeyihiin faa'iidooyin dhawr ah. Ugu horreyn, waad go'aamin kartaa saamiga tubaakada iyo xashiishka, waxaad ka dhigtaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin kuwo isku mid ah ama mid ka mid ah u doorto inuu kan kale xukumo, iyadoo kuxiran saameynta aad rabto.
Waxa kale oo aad dooran kartaa nooca warqadda aad rabto inaad adeegsato, oo leh xulashooyin dhadhan iyo kuwa aan xaddidnayn oo laga xusho. Waraaqaha Tubaakada guud ahaan way ka macaan yihiin warqad hemp, sidaa darteed waad dooran kartaa warqada ku saleysan astaanta dhadhanka ee aad doorbideyso. Dhadhanka waraaqda dhadhanka ayaa ku jira noocyo badan, oo ay ku jiraan mooska, malabka, tufaax cagaaran iyo qaraha. Duubista way fududahay haddii aad ogtahay sida loo duuddubo laabatooyinka, sidoo kale waad wareegi kartaa dhagax weyn.
Qulqulka ayaa bixiya dhowr faa'iidooyin oo kala-goysyada iyo burooyinku aysan lahaan doonin. Waa kuwan saddexda faa'iidooyinka ugu waaweyn ee daadadku:
Si fudud. In kasta oo ay fududaato in la duuddubo laabatooyinka waxay kuxirantahay tayada iyo xashiishadda cannabis, qulqulka qulqulka ayaa leh faa iidada ay u leeyihiin wax-u-dhis. Tubaakada waxay u egtahay inay sameyso wax badan oo la shaqeyn karo oo joogto ah, taas oo micnaheedu yahay waqti yar oo diyaarin ah iyo waqti badan oo lagu raaxeysto.
Khiyaano dheeri ah. Haddii aad waligaa iskulaabtay oo aad sigaar cabto si wadajir ah guriga, waad ogtahay in urku uu noqon karo mid xad dhaaf ah oo socon kara saacado haddii aysan ahayn maalmo. Qulqulka, dhinaca kale, waa kuwa xariifnimo badan sababta oo ah waxay u ursadaan si ka badan sida sigaarka tobaakada oo ka xoog badan urinta marijuana. Dabcan, dad badan ayaa caraf udgoon marijuana waxay ka mudan yihiin urta qiiqa sigaarka, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaadan ka taxadarin faa iidadan haddii ikhtiyaarku uusan ahayn arin.
Si ka fudud. Si ka duwan wadajirka, halkaasoo hal dhinac ay gubi karaan si ka dhakhso badan kan kale ama ay gebi ahaanba u bakhtiin karaan, duulaanku wuxuu bixiyaa khibrad fudud oo aan kala go' lahayn. Laga bilaabo bilow ilaa dhamaad, tubaakada ku dhex qulqulaya waxay xaqiijinayaan joogteyn, haddii aad rogto ama aad sigaar cabto.
Koobku ma kaa dhigayaa "mid sare"?
Spliffs waxay leeyihiin faa'iidooyin badan, laakiin mar dambe "sare" kama heli doontid. Gaar ahaan maahan haddii fikraddaada sare ay keento dareen nasasho. Wadajirka waxaa ku jira heerar aad u sareeya oo xashiishad ah, badiyaa gram buuxa oo marijuana ah iyo kala badh lacagta ku baxaysa.
Intaa waxaa dheer, sababta oo ah waxa ay ka kooban tahay tubaakada, nikotiinta kicinta leh ee ka qeyb qaadata ayaa door ka ciyaara isbarbardhiga. Haddii sida caadiga ah aad si firfircoon u hesho inta aad sarreyso, tani waa faa iido. Laakiin haddii aad doorbideyso inaad waxoogaa ka aamusnaato qalabkaaga sigaar-cabista, kala-goysyada ayaa noqon kara doorashada ugu fiican. Wax kastoo aad sigaar cabto, xashiishadda cannabis ayaa sare u kaca THCxoogsaariddu waa muhiim haddii aad raadineyso khibrad cilmi nafsi.
Faa'iido darrooyinka daadadka
Cilladaha ugu caansan ee qulqulaya ayaa ah inay ku jiraan tubaakada, kansar la yaqaan. Dhinaca kale, xashiishka waxaa lagu bartay astaamaha ka hortagga kansarka. Cilmi baaris ayaa muujisay in xashiishadda ay hor istaagi karto koritaanka noocyada burooyinka kansarka qaarkood. Qaar ka mid ah bukaannada kansarka ayaa sidoo kale doorbida xashiishka in loo yaqaan 'opioids' si loo maareeyo xanuunka. Kiimikooyinka ku jira kabadh ayaa baabi'in kara ama ugu yaraan yareyn kara faa'iidooyinka caafimaad ee ay leedahay xashiishadda.
Intaa waxaa sii dheer, loogu talagalay ubaxyo badan oo dhadhamin, marijuana waxay dhadhamisaa sigaarka. Mabda 'isku mid ah ayaa quseeya udgoonka, maadaama dareen ka mid ah qiiqa sigaarku uu dadka qaar u caayo, halka marijuana inta badan ay martiqaad badan tahay. Laakiin sida horeba loo sheegay, cabida qulqulaha ayaa kuu horseedi kara dabacsanaan guud ahaan guud ahaan marka loo eego sigaar cabista laabatada, sidaa darteed ugu dambeyntii waxay ku imaanaysaa dookhaaga.
Hal dariiqo oo loogu gudbi karo dib-u-dhacyadan ayaa ah in la xaddido xaddiga tubaakada ee aad ku daadato qulqulka. Tusaale ahaan, intii aad ku dhex qasin lahayd 50/50 saamiga, isku day inaad 80% xashiishadda ku darto sigaarka 20%. Laakiin haddii arrimaha caafimaadka iyo qurxinta ay yihiin arrimo, waxaad u baahan kartaa inaad ku dhejiso kala-goysyada saafiga ah ee weed.
Ilo ay ka mid yihiin CannaConnection (EN), WayOfLeaf (EN), Khariidadaha Weed (EN)
"Ma sameyn karo xashiish la'aan"
Isagu wuxuu isku riday sanduuqa ganaaxa, laakiin René Barendse wuu argagaxay markii dacwadda ...
Intii lagu guda jiray raadinta shirkadaha xiisaha leh, DrugsInc. Booqo beerta CBD ee CBD-Spain in
Ku soo koritaanka xashiishadda daawada ee guriga waxay walaac ku tahay Caafimaadka Kanada
Caafimaadka Kanada, maamulka caafimaadka ee Kanada, ayaa khamiistii muujiyay walaac ku saabsan xaddiga badan ee marijuana caafimaad ee dadku ...
Sidee ayuu u eg yahay qaybta cannabis ee Yurub?